I-Raw Sustanon 250 ipowder-Abavelisi & abaXhasi-abaMveliso
I-Raw Sustanon 250 powder
Novemba 9, 2018
I-Sustanon 250 yenye ye-steroids elula ongayifumana kwi-labs UG. Nangona kunjalo, kuya kwenzeka nokuba yenye yezona zibiza kakhulu. I-Sustanon 250 powder yindlela evelele kakhulu yee testosterones. Isetyenziswe ikakhulu kwi-testosterone yonyango yokuguqula ukunyusa i-testosterone yomntu kumazinga aphilileyo. Ngokunyusa amazinga e-testosterone abafana banako ukuziva beqhelekileyo kwaye banempilo kwakhona.
Raw Sustanon 250 powder ividiyo
I-Raw Sustanon 250 powder Inkcazo
I-Sustanon ligama lorhweba lwe-oven based based injections of testosterone compounds.
I-Raw Sustanon i-250 powder idibaniso yezinto ezine ezine-testosterone eziqinisekisiweyo:
Amanani kumagama abhekisela kwinto yokuba umxholo we-testosterone i-compounds nganye kwimixube yi-250 kunye ne-100 mg / ml, ngokulandelanayo.
Ama-estosterone esters ahlukeneyo anikezela ubomi obuhlukeneyo. Ukuqinisekiswa kwee-moleto ze-testosterone kunika ukukhululwa kwe-testosterone hormone eqhubekayo (kodwa engekho emgangathweni) kwi-injection depot kwi-plasma yegazi.
Nangona iinjongo ze-testosterone esters eSustanon kukubonelela ngezinga eliphezulu le-testosterone, i-testosterone enye-ester elide, njenge testosterone cypionate okanye i-testosterone enanthate, inokwenene inokubonelela ngamanqanaba e-serum testosterone.
I-Sustanon yindlela ekhethiweyo yokubuyisela i-testosterone e-UK.
Le fom ye testosterone yinto ekhethiweyo yokukhetha i-anabolic steroid phakathi kwabasebenzi bezemidlalo kunye nabadlali.
I-Raw Sustanon 250 powder Suqobo
Igama lemveliso I-Raw Sustanon 250 powder
Igama leKhemikhali I-Sustanon 250 powder
uhlobo Numama Sustanon / Sustanon 250 powder
Iqela leziyobisi /
Inani leCAS /
I molecular Fi-ormula /
I molecular WSibhozo /
IMasaisotopic Mass /
Ukuxuba Point 33-40 ℃
I-Biological Half-Life iintsuku 7-9
umbala I powder crystal
yoGcino Tukushisa Ifriji
Aukuguquka I-Sustanon isetyenziselwa ukhathaza ukusilela kwe-testosterone kumadoda.
Yintoni i-Raw Sustanon 250 powder?
I-Sustanon 250 yenye ye-steroids eyaziwayo kwaye isetyenziswa ngokubanzi kummandla weyeza kunye nokwakhiwa komzimba. Kwiimeko ezininzi ezisetyenziselwa ukuphatha amadoda aphantsi kwama testosterone ukuphucula impilo yabantu. I-testosterone ivuselela ukubuyisela imeko kunye nempilo yabantu. Imveliso iphinda isetyenziswe ngokubanzi kwimimandla yokwakha umzimba. Iyaziwayo ngeziphumo zayo ezinkulu ekuncediseni ababukeli bezitho zomzimba ukuba bazuze ngokukhawuleza kunye nokufumana izihlunu.
I-Raw Sustanon i-250 powder Sebenza
I-injection ye-Sustanon iqukethe i-testosterone esters (testosterone propionate, phenylpropionate, isocaproate kunye ne-decanoate). Ezi zivela kwi-hormone ye-sex hormone testosterone, eyenziwa ngamathambo. I-Testosterone yiyona hormone esemqoka ebalulekileyo ekukhuleni okuqhelekileyo, ukuphuhliswa kunye nomsebenzi wezitho zesini zesini kunye neempawu zesini zesini.
I-Testosterone ibalulekile ekuveliseni i-sperm, i-sex drive, i-erection, kunye nokusebenza kwe-prostate gland kunye nezinye izakhiwo zokuzala. Kwakhona kunemisebenzi kwesikhumba, izihlunu, isifuba, iinjongo, isibindi, umongo kunye nenkqubo yesantya ephakathi.
Izinga le-testosterone lendalo litshona ngokukhawuleza kunye nobudala kwaye liwela ngokukhawuleza emva kokutshatyalaliswa kokutshatyalaliswa kwamathambo (umzekelo kwonyango lomhlaza wesifo somhlaza). Amanqanaba angaphinda awele ngenxa yesifo seengqungquthela (i-hypogonadism okanye i-eunuchoidism), okanye isifo se-pituitary gland (ingqumbo kwingqondo elawula ukukhiqizwa kwe-hormone).
Amanqanaba aphantsi ka-testosterone angabangela iimpawu ezifana nokunciphisa i-sex drive, i-erectile dysfunction (ukungabi namandla), ukungabikho kwengqondo, ukukhathala, ukuxinezeleka kwemizimba kunye nokubuthakathaka kwamathambo (i-osteoporosis).
Ukutshintshwa kweTesttosterone kuvumela amanqanaba e-testosterone okwemvelo ukuba abuyele kwizinto eziqhelekileyo aze akhulule iimpawu zokuntuleka.
I-Raw Sustanon 250 powder Isilinganisi
Ukuba okukuqala ngethuba usebenzisa iSustanon 250, ke enye injoyi ephindwe kabini ngeveki kufuneka ibe ngaphezulu. I-500mg / iveki yinto efanelekileyo yokuqala yeTesttosterone kunye neyodwa inokunyamezela ngokukhuselekileyo.
Umjikelo oqhelekileyo uhlala kwiiveki ze-8-12 kuxhomekeke kwiinjongo zomntu.
Nangona kunjalo, abasebenzisi abanomdla bangasebenzisa ukuya kwi-1000 mg / iveki okanye nangaphezulu. Kwizilingo eziphezulu, umngcipheko weempembelelo ziba lukhulu nangona kunjalo.
I-Sustanon 250 ingafakwa kunye nantoni nayiphi enye i-steroid.
I-Raw Sustanon 250 powder setyenziso
I-Sustanon 250 isetyenziselwa amadoda amakhulu ukuba atshintshe i-testosterone ukujongana neengxaki ezahlukeneyo zezempilo ezibangelwa ukungabikho kwe testosterone (u-hypogonadism wesilisa). Oku kufuneka kuqinisekiswe ngeendlela ezimbini ze-testosterone zegazi kwaye zibandakanya iimpawu zekliniki ezifana nokungabi namandla, ukungabikho komntwana, ukuziphatha okubi ngokwesini, ukhathala, imizwa yokudandatheka kunye nokulahleka kwethambo kubangelwa ngamazinga aphantsi kwe-hormone.
I-Sustanon 250 ingasetyenziselwa njengonyango oluxhasayo kubantu besini nabasetyhini.
Thenga i-Sustanon 250 powder eBuasas.com
I-Sustanon 250 isebenzisa, i-Cycle, Isisombululo, iiNzuzo, iziPhononongo
Harris Ron; Ukwakhiwa kweZakhiwo zoMzimba: I-Muscle Inyaniso kwiminyaka eyi-25 kwiiTrenches (2008) p.50
Nam Paul; Ukwakha umzimba kunye ne-Steroids: Ibali lam liBantu (i-2017)
Spellwin Geaorge; I-Testosterone Steroid Cycles: Kubandakanya i-Ultimate Sustanon 250 Cycle (2015)
UTilin Andrew; Umnyango olandelayo weDoper: Unyaka oMangalisa kunye noNkqonkqozo wokuSebenza-Ukuphucula ... (2011) p 38,
Collins Rick; Imisipha yomthetho: ii-Anabolics eMelika (2002) p172, 173,427
I-Chiu MC Incwadana yezilwanyana (2019) p.419
I-Raw Testosterone Cypionate powder (58-20-8)
I-Raw Testosterone Decanoate powder (5721-91-5)
I-Raw Mesterolone (Proviron) ipowder (1424-00-6)
I17-Methyltestosterone powder (58-18-4)